Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Guam » Fialan-tsasatra sy vaksiny any Guam ho an'ireo mpizahatany Taiwanese
Airport • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao Mafana Guam • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • fanorenana • Safety • Vaovao Mafana Taiwan • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News
Vaksinina any Guam
Misy lisitra fiandrasana lava any Taiwan ho an'ny olona hahazo vaksinin'ny COVID-19. Ny fialan-tsasatra any amin'ny faritany amerikana Guam dia ahitana ny vaksininy, morontsiraka tropikaly mahafinaritra, ary tsiro tsy manam-paharoa an'ny fanahy Håfa Adai.
Fantatra amin'ny hoe "Air V & V" ny "fialan-tsasatra sy ny vacccination," dia ahitana ny fatra voalohany ny vaksiny ny safidy, ny mety ny tifitra faharoa, raha ny holidaymakers hijanona ao amin'ny United States faritany fotoana ela Izy.
Nisondrotra ny fahalianana tamin'ireo dia lavitra taorian'ny fanafoanan'ny governemanta Guam ny fepetra takiana amin'ny quarantine ho an'ireo mpitsidika afaka mampiseho fitsapana PCR ratsy avy ao anatin'ny 72 ora alohan'ny sidina.
Ny satan'ny EVA Air, Airbus A321-200, dia iray amin'ireo sidina marobe izay ampandrindrin'ireo masoivohon'ny fizahan-tany any Taiwan, toa ny Lion Travel sy Phoenix Tours. Maherin'ny 2,000 mpitsidika avy any Taiwan no andrasana amin'ny volana Jolay sy Aogositra.
Ny birao mpitsidika Guam (GVB) sy ny manampahefana ao amin'ny seranam-piaramanidina AB Won Pat Iraisam-pirenena dia nandray ny sidina mivantana voalohany nataon'i Guam avy any Taiwan tao anatin'ny herintaona sy tapany. Ny EVA Air sata fiaramanidina nitondra mpandeha 153 ny nosy handray anjara amin'ny fizahan-tany Guam ny vaksiny fandaharana - Air V & V.
Mpitsidika maherin'ny 2,000 no handeha avy any Taiwan mankany Guam mba hanao vaksiny sy hankafy fialan-tsasatra nofinofy miaraka amin'izay.
Niverina tany Guam ireo mpizahatany Taiwaney
"Vao fanombohan'ny fifohazan'ny indostria laharana voalohany an'i Guam ity," hoy ny filoham-pirenena & CEO GVB, Carl TC Gutierrez. "Misaotra ny Governora Lou Leon Guerrero nanohana ny fandaharana Air V&V aho, izay manome ny mpitsidika ny vaksiny sy miaina ny toe-tsaintsika Håfa Adai."
GVB dia nanome rano tavoahangy maimaim-poana sy fanadio tanana ho an'ireo mpandeha rehefa avy niainga avy tany amin'ny fifindra-monina izy ireo nankany amin'ny toeram-pisavana avy amin'ny Sampan-draharahan'ny Fahasalamam-bahoaka sy ny asa sosialy (DPHSS). Nisy mpandeha ihany koa notsenaina tamin'ny mozika Chamoru mivantana avy amin'i Ruby Santos sy Jesse Bais.
"Te-hanaiky ny fiarahamiasa lehibe misy eo amin'ny Office Guam Taiwan, EVA Air, sy ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny varotra hafa aho mba hahombiazan'ity sidina ity", hoy ny talen'ny GVB an'ny Global Marketing Nadine Leon Guerrero. "Tianay ny misaotra ny Manam-piaramanidina Iraisam-pirenen'i Guam, ny fadin-tseranan'i Guam sy ny Quarantine, ny polisy seranam-piaramanidina, ary ny fahasalamam-bahoaka noho ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny fandraisana ireo mpitsidika ny nosy mahafinaritra anay."